Izinja kunye namakati akakwazi ukuthetha ngendlela abantu abayenzayo ngayo. Kodwa bonke bakwazi ukuvakalisa isimo sabo sengqondo kwihlabathi, imizwa yabo kunye neminqweno, ngokusebenzisa ulwimi lwezandla. Emva kokuba usebenzise ezi ziseko zokunxibelelana kunye nolwimi lwezilwanyana, unokuhlala ulula "ukutyhila" isilwanyana sakho. Ukuba akunjalo - awukwazi ukuphepha ukucaphuka nokungaqondi.
Ngokuncedwa kwee-paws, zombini iikati nezinja "kunokuthetha". Kodwa, awuyi kukholwa, ukunyuka okufanayo kunye kwaye kufuneka ukutolika ngendlela ezahlukeneyo. Ukuphakamisa intambo yakhe yangaphambili, inja ibonisa iimvakalelo ezinobungane. Ukuba uthetha intloko yakhe, uqonda ulwimi lwakhe ngokukhawuleza: "Andizi ukuba ndifuna ukuba ngabahlobo kunye nawe, kodwa andiyingozi." Intloko ephakamileyo ephakamileyo kunye nokuzimela kwinqanaba leendlebe, ukuba inja iyazizithemba, iyathemba abantu, kodwa ayibonakalisi ukuzithoba kwaye ngexesha elifanayo ilindele ukuphathwa. Kwikati, i-forepaw ephakanyisiwe ilumkisa ukuba isilwanyana sithukuthele kwaye silungele ukuhamba kwizenzo ezinqabileyo. Ukwandisa i-paw kwi-landlady kwaye uyichukumisa ngokukhawuleza, ikati iyamcela ukuba athathwe. Ukubona wena, ikati iphakamisa, ibeka phantsi iphinde iphinde iphakamise iphambili yayo? Uyakuthanda kwaye uwamkele ngenhliziyo. Ngendlela: ukuba emva kwalesi siko isilwanyana siphendule emva kwakho kwaye sikhulise umsila ovuvukileyo - uyayifumana inhlonipho.
Izisipha zezimpawu kwiikati kunye neenja azange ziphuhliswe njengabantu, kodwa oku akuthinteli iimfuyo zethu ekuboniseni iimvakalelo zabo. Ikati idonsa umlomo ophezulu, ukukhwaza into ekhangayo. Yaye ukuba inja iphakamise umlomo wayo ophezulu ukuze amazinyo angaphambili kunye neengwenya zibonakala, kuya kuba nokulwa ngoku. Kwaye inzulu kakhulu isilwanyana, xa kuvezwa amazinyo angaphambili. Esi sisilumkiso sokugqibela ngaphambi kokulwa, xa intshaba inikwe ithuba lokubuyela. Nangona kunjalo, izinja ziyakubonisa amazinyo abo, kwaye, aziyi kuluma: ngokukhawuleza ukumomotheka kwe-2-Hollywood uthi uyithande, ukulungele ukuthetha nawe. Kuyinto enomdla ukuba ukubingelela okunjalo kwenja "kugcinwe" kuphela kubantu, njengomthetho, abayikho konke ukuthambisa kwiintsapho zabo.
Bobabini kwiikati nangezinja, iindlebe zixhobo eziphela jikelele zokubonisa imizwa eyahlukileyo. Iindlebe eziphakanyisiwe ngokugqithisileyo - isalathisi sehlabathi jikelele senja kunye neekati. Inja igxininisa indlebe yakhe entlokweni yayo evela kwintlanzi yasendle xa umninimzi ehlaba. Kweminye imiba, wenza okufanayo, ukubuyela ngaphambi komfokazi aze abonise ukukhathazeka kwakhe. Ukuba ikati iphosa iindlebe zayo, kwaye umsila wayo yenza imijikelezo, yonke into ithetha ukugqithisa okukhulu. Iindlebe zekati zixhomekeke entloko, umsila welulelwe kwaye ushwankqele - ungenangqiqo: "Ndiya kuwe!" Xa iindlebe zithende kwaye zihoxiswe emacaleni - ikati ayinakucala ukudlala. Kodwa ukuba, ngaphezu koko, buyela emuva, kuthetha ukuba umnini-propati wabo wenza ukuba kucace ukuba ungaphandle kweentlobo kwaye kungcono ukumshiya yedwa. Ukubona ingozi, ikati igcina iindlebe zayo kunye nokuhamba phambili.
Uhambe ukuhamba kunye nenja, kwaye ngoku, nceda, nceda: inja yakho ehlambulukileyo, ehlambulukileyo ngoku kwaye uzama ukuhlazeka emhlane. Utshintshisa i-paws yakhe kwaye ngokuzenzekelayo uhlambela yonke isitalato "iphunga" kwiboya. Musa ukukhawuleza! Inja ithatha isikhundla sokuba "isisu" ukuba ungayiphulaphuli ihlazo lakho. Uthetha ngezinto ezibaluleke kakhulu kuye. Ukuba kukho enye inja eseduze, into ekhulu kunayo kwaye inamandla kunayo, isisu esilula sithetha ukuba isilwanyana sakho siyabona ubukhulu bakhe kwaye akafuni ukumkhathaza. Ukuhlasela umntu ovulekileyo akunakwenzeka. Inja yakho ingcolile, kodwa idiplomat. Inkohliso engenakukhathazeka yenja ifundwa ngethuba lobudala kwaye ihlala ilungele ukuyisebenzisa. Ukuba inja iqala ukukhwela emqolo wayo, engabikho mntu uyasongela, ithetha ukuba utyhafu olumzingela luye lwavusa emphefumlweni wakhe. Ufuna ukuguqula iphunga lakhe, elingamnceda xa efika kwindawo yokuzingela.
Ikati ilele emhlane, ibonisa isisu xa evuyiswa kwaye ezolile. Kodwa ukuba ikati ivumelekile ukukhwela kwi-positi enjalo phantsi, abanini abanokungabaza: waqala i-estrus. Ikati iyafana xa ifuna ukuqwalasela abanini. Kuphawulwe ukuba iikati ziyakuthanda ukulusebenzisa kulolu hlobo "lwe-gymnastics", xa abantu abangahambi nabo bevela kwisini esifanayo kunye nabo. Okanye ummeli emehlweni abo ubonisa ukunyuselwa kwelinye isilwanyana.
Ukunxibelelana kunye nolwimi lwezilwanyana luxutywe. Ngesizathu esithile, kukholelwa ukuba inja iyayigxotha umsila wayo, efuna ukubonisa ubungqina bayo. Oku kwaqala ngokucaciswa ngokucacileyo ngumntu onobuqili ukuba ahlalutye kwizinto eziqhelanayo, indlela yokuqonda izilwanyana. Naluphi na inja iya kumangaliswa ukuba iyaziswa kulo mbono. Enyanisweni, intshukumo enamandla yomsila ikhuluma kuphela ngothutho lwesilwanyana, kodwa ayisoloko ibonisa isimo sayo esihle. Inja, ilungele ukuhlaselwa, ingakwazi ukuguqula umsila wayo ngokukhawuleza, ngelixa umsila usemgangathweni, kwaye ukunyakaza kwawo kufana nokugubha. Kwaye ukuhamba ukuthuthumela komsila okwenza inja ibonakale inzuzo phezu komdlali. Kule meko, ukuzithemba ngakumbi kwesilwanyana, ukuphakamisa umsila uphakanyiswa.
Ngaba uqaphele ukuba inja yakho yaqala ukugubha umsila wayo ngokugqithiseleyo, uyibeke phakathi kweemilenze zayo ezinamahlombe? Ukukhawuleza ukukhawuleza ukunceda: inja iyatshutshisa kakhulu, isondele kwintlanzi. Kwaye ngamanye amaxesha izilwanyana ezincinane ngale ndlela zingabonisa kuphela umnqweno wokudlala. Nangona kunjalo, kulo mzekelo, isimemo sokudlala sizama nje ukunciphisa ulwaphulo oluchasayo kwiintshaba.
Ukunyakaza komsila wekethi kungabonakali. Ikati ibetha umsila wayo, ilungiselela ukuzingela. Ikati yakho ihleli ngokuthula kwaye ibonakala ingayikhokheli ingqalelo. Kodwa intonga yomsila uhamba-into enomdla kakhulu, kodwa akafuni ukubonisa inzululwazi. Umsila uyancitshiswa kwaye unqabile - uphawu loxinzelelo kunye nokwenyulwa kwezinto ezenzekayo. Umsila oqweqwe emilenzeni yekati ehleliyo uthetha "Ndilinde" okanye "Ndibukele." Ngokuxhomekeke kwimeko.
Phakathi kwezilwanyana zethu ezifuywayo kukhona nabo abangaqhelekanga ngolwimi lwabo lwezandla ngolwimi lwezandla, kwaye baqulunqa ngokwabo ngesibindi, ngamanye amaxesha bavakalisa kakhulu. Nayi imizekelo embalwa. Inkosikazi yekati yayihleli kwikhompyutha yonke imini, igxininiswe emsebenzini. Ikati yaxhwaba kwaye ekugqibeleni ifumene indlela efanelekileyo yokutsala ingqalelo. Ngokukhawuleza xa umnakekeli evula ikhomputer, ikati yagijima kwifestile kwaye yayicinga ukuba kukho imikhosi, idonsa kunye ne-paws eglasi. Kwaye enye ikati ekhethileyo ekudleni, xa ukutya kwakufakwe kwisitya sayo, engayithandiyo, waqala ukutshitshisa i-paws yakhe phantsi phantsi kweplate. Njengokuba ngaba phambi kwakhe kwakuyi-tray ene-filler yezindlu zangasese, kwaye wayefuna ukumngcwaba konke okukhawuleza kunokwenzeka.
Izilwanyana ziphilisa abantu
I-Cheetah - ikati yangasendle yangempela
Indlela yokuxhatshaza intshontsho inyoka
Indlela yokukrazula i-midges kwindlu ngokwabo?
Indlela yokuphatha ubusika kumntwana omncinci
Iimpawu zokufumana iAvocado kwaBasetyhini
Ungakuphepha njani ukulungisa umshini wokuhlamba?
Ukuzibulala: njani unokuthintela ukungenakulinganiswa?
Ihoteleti emhlophe emhlophe
Iinzuzo kunye neepropati zerayisi ye-raspberry
Ukubala imibala emfutshane